အပြင်းပြေ ဆော့ရန်...Angry Birds Game...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ဒီနေ့ကျွန်တော် အပြင်းပြေ ကစားလို့ရအောင် Angry Birds Game... လေးတစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...! အပြင်းပြေပြီးပျော်စရာ အရမ်းကောင်းပါတယ်...! ကျွန်တော်ကတော့ အရမ်းသဘေားကျပါတယ်...! ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း 98.7MB ပဲရှိပါတယ်...! တစ်ယောက်ထဲနေတဲ့ အခါဒီလိုပေါ့ပေါ့ပါးပါး Game လေးဆော့ရတာ ပျော်ဖို့အရမ်းကောင်းပါတယ်...! အောက်မှာ Media Fire... လေးဖြင့် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...!
No Response to "အပြင်းပြေ ဆော့ရန်...Angry Birds Game...!"